Home » Lahatsoratra farany farany » News sustainability » Mampiorina ny fizahan-tany maharitra miaraka amin'ny angovo azo havaozina
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Vaovao • tompon'andraikitra • News sustainability • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Fizahan-tany maharitra sy angovo azo havaozina
Ny fampifandraisana ireo indostria mitovy hevitra, mba hamoronana cluster synergetika dia tsy zava-baovao. Ny tondro dia ny hanomezana ny angovo azo havaozina ho toy ny singa voajanahary amin'ilay sosokevitra 'maharitra' momba ny Travel & fizahan-tany… (“tsy misy fizahan-tany maharitra maharitra tsy misy angovo azo havaozina”), ary hampiroboroboana ary hampivelatra sy hampiorina ary hampihatra ny fizahantany maharitra sy ny angovo azo havaozina amin'ny ambaratonga lehibe.
Voahosihosina mafy ny tontolo iainantsika, ary ny fitomboan'ny isan'ny mpitsidika alohan'ny Covid-19 dia nahatonga ny mpitsangantsangana hanasongadinana ireo toerana fitsangantsanganana.
Raha ampiantsika amin'ny fandotoana ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetrandro, anisan'izany ny areti-mifindra, dia fantatsika fa kely kokoa noho ny sivilizasiôna iray eny amin'ny sampanan-dalana.
Ny famadihana ny onja avy amin'ny fôsily ho amin'ny Renewable Energy dia midika hoe manomboka eo amin'ny farany ambany amin'ilay rojom-pitohizan'ny 'fitohanana maharitra'.
Rehefa dinihina tokoa, ny angovo azo havaozina dia nipoitra avy amin'ny fanandramana ifotony teny an-toerana efa am-polony taona lasa izay lasa loharanon-kery lehibe 'maitso' manan-danja sy miparitaka be ankehitriny.
Ny angovo azo havaozina dia ekolojika, mizaka tena ary tsy misy fetra; tsy mila miady izany. na Fizahan-tany maharitra ary ny angovo azo havaozina dia mizara izany idealy izany ihany. Amin'ny fampiasana ny fiantraikany amin'ny catalyst, ny indostria roa dia mifameno sy mifameno.
Ny fomba fanatontosana ny faharetana dia hita taratra amin'ny toe-batana sy ny fisehoantsika ivelany sy ny tontolo iainantsika. Tsy dia mahafinaritra foana ny fahatsapana: trano simba, kianja maloto ary lalana mikitoantoana, renirano maloto sy ny velaran-tany feno tavoahangy plastika sy fako hafa: ireo dia milaza ny tsy firaharahan'ny olona loatra sy ny fahavononan'ny mpanapa-kevitra be loatra.
Voahosihosy mafy ny tontolo iainantsika nandritra ny taona maro, ary ny fitomboan'ny isan'ny mpitsidika alohan'ny Covid-19 dia nanao freoteche freeway ary manasongadina ireo toerana fizahan-tany fizahan-tany an'ny fizahan-tany. Na dia efa ela be aza ny tolo-kevitry ny "landscapes madio" azon'ny manam-pahaizana ampiasaina sy ny vahinin'ireo mpitsidika dia manaitra ny fahalotoan'ny tontolo iainana mba hahatakarana azy: satria ny entropy dia tsy mifanohitra amin'ny angovo, nefa ny tsy fisiany, toy izany koa ny fahalotoana tsy ny mifanohitra amin'izany ny fahadiovana, fa ny tsy fisiany.
Raha manampy amin'ny fandotoana ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena ary ara-pahasalamana ankehitriny isika, ao anatin'izany ny areti-mandringana, dia fantatsika fa tsy latsaky ny sivilizasiôna iray eny amin'ny sampanan-dalana, tototry ny adihevitra be adihevitra sy toerana fananganana sarotra. Ny fanontaniana dia, aiza no hanombohana, raha tsy ny loza tsy ampoizina no mibaiko ny hetsika eo noho eo?
Ny karazana fandraisana andraikitra dia atao amin'ny alàlan'ny angovo - raha tsy misy angovo dia misy entropy fotsiny, raharaham-pirenena tsy miova. Angovo - hatrizay ampiasain'ny herin'ny atôma, ny hazo ary ny arina, na ny solika sy ny entona, dia tsy nitondra aretin'andoha mihitsy tany amin'ireo firenentsika tena be orinasa. Nahazatra anay ny momba ny famatsiana angovo toy ny 'avy amin'ny socket' araka ny nomena.
Miaraka amin'ny fisalasalana kely ihany anefa: hatramin'ny voalohany, ny angovo atomika dia niatrika ny mety hisian'ny taratra taratra sy ny olana amin'ny fitahirizana fako nokleary. Tsy mahagaga raha ny tanjaky ny atôma no lasibatra ankafizin'ny hetsi-panoherana mpiaro ny tontolo iainana, indrindra satria nahatratra ny isan'ireo lozam-pifamoivoizana niokleary, niaraka tamin'i Chernobyl teo an-tampon'izy ireo tamin'ny 1986. Mazava izany: Na dia afaka amin'ny fandringanana ireo entona entona misamboaravoara aza ny angovo atôma. ny fampiasana azy am-pilaminana no zava-drehetra nefa tsy mampidi-doza.
Tamin'ny fotoana nahalalantsika ihany koa fa ny angovo azo avy amin'ny fôsily dia tsy manimba ny tontolo iainana voajanahary sy ny toetrandro, fa voafetra ihany koa amin'ny fisian'izy ireo. Tonga ny fotoana hitadiavana ireo loharano angovo hafa. Ireo havaozina toy ny rivotra sy ny masoandro dia tonga teo an-tampon'ny fandaharam-pifanarahana amin'ny fihaonambe momba ny toetrandro, ary vetivety dia nahatratra ny ampahatelony sy mihoatra ny totalin'ny fanjifana angovo ny angovo azo havaozina. Toa misokatra ho an'ny ho avy angovo madio ny lalana, raha tsy nisy ny sakana kely sy lehibe tsy maintsy resena, raha tsy hiteny aloha ny fiovan'ny toetr'andro sy ny olan'ny fitehirizana.